SABABAHA, DAAWEYNTA IYO KA HORTAGGA UDDER-SKEMA EE LO'DA - XOOLAHA
Cunnaanta lo'da waa mid ka mid ah qaybaha ugu nugul ee jirka.
Sida candho xoolo ah, waxaad ogaan kartaa in xayawaanka ay caafimaad qabaan iyo sida ay u dareemeyso.
Haddii uu candho xoolo bararayo, uu noqdo mid aad u kulul, ama waxaa jira isbeddelo kale oo dibedda ah oo wajiga waji leh, ka dibna dhakhtar xoolaha waa in si dhakhso ah loogu yeero si loo soo gabagabeeyo xaalada guud ee xayawaanka.
Waxaa jira waxyaabo ay ka mid yihiin bararka cunidda. Mararka qaarkood waxaa sidoo kale loo yaqaannaa 'congregative' ama 'edema'.
Marka bararka la baro waxaa loola jeedaa barar ah candho xoolo ah sababtoo ah khalkhalka guud ee dhiigga iyo qulqulka lafdhabarku uurku uurka awgiis ama dhalashada cunugga.
Si aad u ballaadhan, lo'da kuwa quudiya oo badanaa quudin leh iyo qufacaan ah inta lagu guda jiro qeybta labaad ee uurka waxay ka timaaddaa bararka jooniska.
Udder wuu barari karaa ka hor inta aan la siin dhalashada maalmo yar ama maalinta ugu horreysa - laba ka dib marka lo'da dhalatay. Sababta ugu weyn ee bararka ayaa ah mid wareegsan dhiigga wareegga dhiigga, taas oo ah, socodka dhiigga oo aad u badan, iyo socodka uu aad u yaryahay.
Waa maxay calaamadaha cudurka
Waxay ku barari kartaa sida gunta oo dhan oo dhan, iyo dhabarka kaliya ee. Maqaarka on candho xoolo weyn weyn, ka dibna dhismaha u eg cajiinka.
Haddii la isticmaalo maqaarka, ka dibna waxa uu ka sii dheeraan doonaa sidii caadiga ahayd.
Maqaarka ku yaal qanjirada mammarylka ayaa ka hooseysa heerkulka guud ee jidhka, wuxuu iftiimayaa, inkastoo ay jirto xiisad, lo'da waxba ma dareemeyso xanuun marka uu taabto candho xoolo. Ibtaamadu waa kuwa ugu horreeya ee barara. Waxay u muuqdaan kuwo ka gaaban kuwa ibta oo aan bararsaneyn. Dheeraad ah, xiisadda waxay u socotaa iyada oo loo marayo nudaha subcutaneous to the vulva, oo caloosha iyo gaadho lafta naaska.
Cudurka bararka ayaa sidoo kale lagu ogaan karaa qayb ka mid ah kala bar jiidaha ama beddelka, taas oo ah, "kala-guurka" bararka ka yimaada hal dhinac oo ka mid ah candho xoolo ah ilaa kan kale.
Dheecaan macquul ah ayaa ku urursan unugyada candhuufta, iyaga oo dharbaaxaya. Tani waa xad-dhaaf ku yimaadda socodka dhiigga iyo lymf iyada oo ay sabab u tahay kororka korodhka maraakiibta, taas oo keeneysa in ay is-xakameyn waayaan shaqada iyo nafaqada ee unugyada. Cudurka barar-ku wuxuu sababi karaa naaso ama induction of candho xoolo ah in lo'da.
Heerkulka guud ee jidhka, iyo sidoo kale xaaladda xayawaanka, way kala duwanaan kartaa. Sidoo kale, bararka ayaa saameyn ku yeelan kara jidhka. Cabbitaanka caanuhu wuxuu noqon karaa dareere badan ama aan isbeddelin.
Qadarka caanaha la soo saaray waxaa laga yaabaa in la yareeyo sababtoo ah wareegga liita, laakiin mararka qaarkood waxaa jira isbeddel - mugga caanaha laga helo qaybta caafimaadka leh ee candhuufta waxay noqon kartaa wax ka yar mugga caanaha qayb ka mid ah candho xoolo barar ah.
Cudurka daacuunka wuxuu ku dhici karaa lo'da dhowr maalmood ka hor dhalmada, laakiin dhalmada ka dib, bararka ayaa hoos u dhacaya.
Si kastaba ha ahaatee, kama bixi kartid arrintan adigoon fiiro lahayn. Inkastoo xaqiiqda ah in bararka cunnadu ka hor iyo ka dib dhalashada lo'da loo arko inuu caadi yahay, bararka ayaa keeni kara daciifinta jidhka iyo unugyada caanaha.
Sidoo kale bararka cunnadu wuxuu ka kooban yahay xasilloonida naaska oo hoos u dhacda in ay bakteeriya iyo waxyaabo kale oo khatar ah oo deegaanka ah. Tani waxay keeni kartaa horumarinta naaso.
Cudurka daacuunka wuxuu noqon karaa mid joogto ah. Xaaladdan, kordhinta unugyada isku xiran ayaa la arkay, habkan waxaa loo yaqaan 'induction. Miisaanka candho xoolo ayaa kordha, iyo caanaha ka soo baxa lo'da waxaa laga yaabaa inay helaan qadar ka yar intii hore. Bararka dheecaanku wuxuu sidoo kale sababi karaa naaso.
Waxaa sidoo kale xiiso leh in laga akhriyo cudurada cayayaanka ee lo'da.
Sida loo daweeyo barar dhireedka
Haddii barar-ku-jirku uu noqdo mid ku dhalata dabeecadda kadib, inta badan waxay u badan tahay, 5-8 maalmood ka dib dhalashada, bararka ayaa iska tagi doona.
Haddii candhuufuhu aad u bararto, waa lagama maarmaan in la qaado tallaabooyin dhamaystiran.
Inta lagu jiro xilliga daaweynta lo'da aan la quudin karin tiro badan oo ah quudin suuban, waxaad u baahan tahay inaad yareyso xaddiga dareenka xayawaanka, iyo inaadan siin milix.
Cuntada waa inay ka kooban tahay hay "tayo sare leh. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in caano this badiyaa, 7-8 jeer maalintii. Xaddiga dareeraha la isticmaalo waa in lala socdaa.
Haddii barararka uu istaago, markaa waxyeellada farsamooyinka ah ee qaybta jilicsan ee candho xoolo ah lama ogola.
Waa lagama maarmaan in la kala saaro xayawaanka intiisa kale ee lo'da, iyo sidoo kale u qaadashada saacad socodka 2-3 jeer maalintii.
Suurtagal duugo candhuuf ka soo hooseeysa ilaa sareiyada oo aan la isticmaalin wax cadar ah, sida bararka ayaa si adag loo mamnuucayaa isticmaalka.
Haddii aad dareentid in candho xoolo uu bararayo, iyo maalmo yar ka dib, lo'da waa in la dhalaaliyaa dibi, ka dibna xayawaanku waxay u baahan yihiin in maalin kasta la caano dhigo.
Hadafka ugu weyn ee daaweynta cagaarshowga cuna-qabatinka waa inuu soo celiyo wareegga dhiigga iyo wareegga wareegga ee unugyada candhuufta, iyo sidoo kale in la yareeyo heerka cadaadiska isku-dhexaadka. Hadafyadaas waxaa lagu gaari karaa iyada oo loo marayo caanaha soo noqnoqda ee lo'da iyo duubista candho xoolo.
Marka laga eego aragtida daaweynta caafimaadka, dhakhtarka xoolaha ayaa xiri kara gluconate lo'da ama chloride lo'da, iyo sidoo kale kiciyeyaasha qadarka wadnaha, taas oo gacan ka geysaneysa in si deg deg ah looga saaro dheecaanka jidhka.
Sidoo kale, dhakhaatiirtu waxay inta badan u qoraan duufaanada gaarka ah ee xayawaanka, iyo sidoo kale caloolxirayaasha iyo maqaarka.
Si aad u sameysid bararka ayaa si dhakhso ah u baaba'aya, waxaad sameyn kartaa lo'da poultice ee ciid ah, iyo sidoo kale ku duubi candho xoolo ah diiradda kulaylka. Haddii candhuufuhu uu noqdo mid culus oo uu hoos u dhacay, ka dibna waa in lagu xiraa faashad gaar ah.
Kahortagga - ha u ogolaanin bararka
Si looga hortago muuqaalka barar ku dhaca lo'da uurka, waxaad u baahan tahay inaad qabanqaabiso jimicsi maalinle ah, inaad siisid cunto quudin ah.
Haddii barar uu soo muuqdo, ka dibna raashinka casiirka ah guud ahaan waa in laga reebo cuntada ilaa uu bararka ka sii daro.
Daryeelka gaarka ah waa in la siiyaa nafaqada ilmo uur leh hal ama badh ilaa laba toddobaad kahor intaan dhalashada, iyo sidoo kale 10 ilaa 14 maalmood ka dib.
Sidaas awgeed bararka ayaa keena horumarinta mastitis ee lo'da, waa lagama maarmaan in la waafajiyo dhammaan heerarka nadaafadda si ay lo'da ugu noolaato xaalad nadiif ah.
Ha u ogolaanin isbeddel deg-deg ah heerkulka dabka, iyo qashinkiisa si joogto ah waa loo badalayaa.
Ka hor intaanad ku dhejinin lo'da dhar jiilaalka ah, qolku waa in si fiican loo nadiifiyaa si loo dilo dhammaan suxufiyiinta suurtogalka ah ee cudurka.
Sidoo kale, si looga hortago bararka jooniska, waxaad u baahan tahay inaad caano si sax ah u caano.
Marka ugu yartahay bararka cunnooyinka, waa inaad isla markiiba ku martiqaaddaa dhakhtar xoolaad ah oo baadhi doona lo'da iyo sawir gabagabo.
Xitaa haddii qaylo-dhaanku been yahay, waxaad qaadi kartaa tallaabooyinka lagama maarmaanka ah waqtigooda haddii loo baahdo.